Nkwuwa Aka Na-agbanwe Agbanwe Worldwa na OTM Mumbai
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Nkwuwa Aka Na-agbanwe Agbanwe Worldwa na OTM Mumbai
Inweta njem nleta • Airlines • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • India na -agbasa ozi ọma • investments • LGBTQ • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ihe Ngbanwe Okpukpe Na-agbanwe Agbanwe Ministerswa: Ndị na-ahụ maka njem nleta na Gris na India ga-ezukọ ma mepee ihe ngosi njem njem na Asia-Pacific, OTM Mumbai Mumbai, 31 Jenụwarị 2020: Mịnịsta njem nke Gris, Harris Theocharis ga-esonye na Minista India nke Steeti maka njem nlegharị anya, Prahlad Singh Patel na Mịnịsta njem nlegharị anya nke Uttarakhand, Satpal Maharaj, na emume nnabata nke OTM Mumbai, otu n’ime ndị ahịa ahịa njem India kacha mara amara, na Bombay Exhibition Center na February 3.
Mgbe Gris malitere isonye na OTM Mumbai na 2016, a na-ewere ya dị ka nkwuwa okwu iji gbanwee site na ahịa ọdịnala ya. Kemgbe ahụ, a na - ahụ nnukwu mmụba, na ndị njem si India karịa okpukpu abụọ na 2017.
A na-atụ anya OTM njem njem njem kachasị ogologo nke India OTM ga-anabatakwa ndị ngosi ngosi 1050 + sitere na mba 55 +, nke 23 bụ National Tourism Organisations (NTOs). Ebe ndị njem si Europe, Africa, na Amerika ga-anọ na ngosi a yana ndị ogbo ha Asia. Indonesia, Malaysia, Cambodia, Japan, Korea, Taiwan, Thailand, Sri Lanka, na Nepal ga-akwado ọnụnọ Asia na ngosi ahụ. Azerbaijan na Gris ga-anọ ebe ahụ iji tinye ekpomeekpo nke Europe. Egypt, Kenya, Tanzania, na Rwanda sokwa na OTM.
Ndị ọkacha mmasị n’ụlọ India n’etiti ha bụkwa ebe etiti-ihe karịrị 30 Steeti Ndị Njegharị na Union Territories ka a ga-egosipụta na ụlọ ntụ mara mma nke na-egosi ọdịnala ọdịnala ha pụrụ iche.
Site na Mumbai bụ ahịa kachasị ukwuu na India maka ọpụpụ yana njem ụlọ, ihe nkiri a na-aga n'ihu na-eto eto kwa afọ. Ngosipụta ụbọchị atọ ahụ na - ewetara ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ njem njem 15,000 + gụnyere ndị 800 + ndị kachasị B2B ndị na - azụ ahịa site na ahịa ndị ama ama ama ama n’India.
High profaịlụ okwu na OTM gunyere Onye isi ala nke Thomas Cook (India), onye isi nke SOTC na onye isi ndi isi ahia nke MakeMyTrip.
Dabere na data nke Ministry of Tourism wepụtara, ndị India na-eme njem karịrị otu ijeri njem na India na 30million na mba ọzọ, kwa afọ.
OTM Mumbai bụ ọnụ ụzọ abanye na ahịa njem India. OTM 2020 ga - eme na thelọ Ọrụ Ngosipụta Bombay site na 3 - 5 February 2020. Ihe omume zuru ụwa ọnụ - ihe karịrị ndị ngosi 1,000 sitere na mba 55 + na-esonye na mmemme ụbọchị atọ na ndị ahịa 15,000 B2B na-azụ ahịa si India, Asia na gafere ịga OTM . Kemgbe 1989, ọ na-enye ndị nọ na ụlọ ọrụ ndị njem nleta ikpo okwu iji zụọ ahịa n'otu n'ime ahịa njem kachasị ọsọ na ụwa - India.
Kpọtụrụ ndị mmekọ: Laboni Nkata, [email protected], + 91 22 4555 8555, Fairfest Media Limited